အင်တာနက်မျိုးဆက်၊ Blogging, လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်နှင့် နိုင်ငံရေး | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
အင်တာနက်မျိုးဆက်၊ Blogging, လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်နှင့် နိုင်ငံရေး	Posted by mm thinker on November 24, 2008
Posted in: Blogging, Politics.	Tagged: Blogging.	Leaveacomment
နေဘုန်းလတ်ကို ထောင်ဒဏ်မတန်တဆ ချပစ်ခြင်းသည် နောက်ကွယ်နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပတ်သက်မှုရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ပေါ်ပြူလာအမြင်အားဖြင့် လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ် မျှော်မြင်သော၊ အတိုက်အခံ သဘောထားရှိသော ဘလောဂ့်ဂါများကို အကြီးအကျယ် နမူနာပြမှုတစ်ရပ်၊ ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ရပ်အဖြစ် သိသာစေပါသည်။ နအဖ၏ ပထမ ဘလော်ဂါ စစ်ဆင်ရေး
နအဖ၏ ပထမဘလော်ဂါစစ်ဆင်ရေးအဖြစ် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစ၍ အထူးရွေးချယ်ထားသော အစိုးရဝန်ထမ်းများကို အပတ်စဉ်အလိုက် ဘလော့ဂ်သင်တန်းပေး၍ အနည်းဆုံးအားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၏ Image ကို မြှင့်တင်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းပေးသူမှာ မြန်မာ Blog လောကတွင် Pioneer ဟု လူသိများသော လူငယ်တစ်ဦးလည်း ပါဝင်ခဲ့ရာ၊ ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်၍ အစိုးရကို နည်းပညာ ကျောထောက်နောက်ခံပေးနေသော Crony များကို ဖော်ထုတ်ရန် လမ်းကြောင်းရနိုင်ပေသည်။ သို့သော် လေ့ကျင့်ပေးထားသော ဝန်ထမ်းများသည် မထိရောက်သော ပို့စ်အနည်းငယ်ကို တင်သည်မှအပ ပျောက်ကွယ်သွားကြသည်သာ များပါသည်။ Ideology ရိုက်မသွင်းနိုင်ခြင်း၊ အင်တာနက်သုံးစွဲရန် မဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်းတို့က အဓိက အကြောင်းရင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ယင်းသင်တန်းဆင်းထဲမှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဘလော့ဂ် အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသူများ၊ ဟာသဘလော့ဂ်အဖြစ် ယနေ့တိုင် ရပ်တည်ကျန်ရစ်သူများ ရှိသော်လည်း နအဖ အာဘော်ကို ထုတ်ဖော် ထင်ဟပ်နိုင်ခြင်းကား မရှိပေ။ ဘလော့ဂ်ဂါ အတော်များများက သူတို့နှင့် ဆက်ဆံနေကြသည့်တိုင် နအဖဘလော်ဂါများဟု မသိရှိကြသည်ကိုလည်း လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ ဒုတိယ ဘလော်ဂါစစ်ဆင်ရေး
ယင်းတို့အထဲတွင် မီဒီယာစီးပွားရေးသမားအချို့ ကျောထောက်နောက်ခံ ပေးသည်ဆိုသော ဘလော့ဂ်အချို့(သာဂီနွယ်၊ ပိတောက်မြေ) တို့သာ ဆက်လက် ရပ်တည်နိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ယင်းတို့ကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်၍ Dot Com များဖြင့် လှုပ်ရှားလာရာ ပြည်ပ အခြေစိုက် မီဒီယာများကိုပင် ယှဉ်ပြိုင် ချေဖျက်၊ အင်ဖော်မေးရှင်း ထင်ယောင်ထင်မှားများ ထိုးသွင်းလာသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုနအဖဘက်မှ နိုင်ငံရေးဘလော့ဂ်များသည် အလံရှုးများဖြင့် ဘလော့ဂ်ပွဲဆူအောင် လုပ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေး အာရုံညွှတ်သော ဘလောဂ့်ဂါ လက်သစ်များကိုပင် သွေးဆောင်လာနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိနေရသည်။
နမူနာခြိမ်းခြောက်မှုအဖြစ် နေဘုန်းလတ်ကို နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် အနာဂတ်နိုင်ငံရေး ဘလော့ဂ်လောကတွင် မည်သည့်သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်သွားနိုင်သနည်း။ စစ်အစိုးရ၏ ကသောင်းကနင်းများကို မထိတထိရေးလေ့ရှိသူ ပြည်တွင်းဘလော်ဂါတစ်ဦးက နေဘုန်းလတ်ကိစ္စကြောင့် တွန့်ဆုတ်ရန်မရှိကြောင်း၊ ရေးနေကျအတိုင်း ဆက်ရေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြတ်ပြတ်ပင် ပြောပါသည်။
ပြည်ပတွင် ပညာသင်ကြားနေသည့် နာမည်ရလာသော ဘလော်ဂါလက်သစ် မိန်းကလေးတစ်ဦးကမူ ဘလော်ဂါများ တွန့်ဆုတ်သွားမည် မထင်ကြောင်း၊ ဖြစ်လာနိုင်သည်မှာ မတရားမှုကို ခံပြင်းသောကြောင့် ယခင်ဘလော့ဂ်မရေးသူတွေပင် ရေးလာနိုင်ကြောင်း မှတ်ချက်ပေးပါသည်။ မည်သို့ဆိုစေ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ အင်တာနက်လူငယ်မျိုးဆက်များက မကြောက်မရွံ ဘလော့ဂ် ပလက်ဖောင်းမှတဆင့် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊ အင်ဖော်မေးရှင်း ဝေမျှခြင်းတို့ဖြင့် စစ်အစိုးရကို ဆက်လက် အာခံနေဦးမည်ဆိုသည်မှာ အသေအချာဖြစ်ပါကြောင်း။ ခက်ထန်
← ပြည်တွင်းမှာ စာစောင်တစ်ခုကို ဘယ်လိုထုတ်ရသလဲ	The William H. Foege Fellowship in Global Health →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...